पशुपतिको जग्गा भाडा : प्रतिआना मासिक साढे नौ रुपैयाँ - Medianp
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २९, २०७४०८:२२0
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा रकम हेर्नुपर्छ । कोषले व्यापारिक निकाय हायात होटललाई एक आना जग्गा लिजमा दिएबापत मासिक नौ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा लिइरहेको छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । कोषले उक्त होटललाई १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । तर, यसबापत कोषले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको छ ।
होटलले कोषलाई दिने तिरो ०६८ सालमा ५० गुणा वृद्धि गरी यति पुर्‍याइएको हो । कोषले प्रतिरोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धानका हिसाबले जग्गा लिजमा लगाएको हो । जसअनुसार १८ रोपनीको मात्रै अठार मुरी धानको मूल्य हायातले कोषलाई तिरे पुग्छ । कोषका अनुसार उक्त जग्गामा तारागाउँ विकास समितिको मोही कायम छ । समितिले हायात रिजेन्सीलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो । पशुपति गुठी मुलुककै सबैभन्दा धनी गुठी हो । जसअन्तर्गत करिब ५ सय रोपनी जग्गा छ ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुठी जग्गाको उपयोगअनुसार कुतबाली तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी वा संस्थागत रूपमा करोडौं, अर्बाैं आम्दानी गर्नेले दिने तिरो कौडीको भाउसरह छ ।’ उनले आफू कोषमा रहँदा प्रयोग र आम्दानीका आधारमा तिरो तोक्न पहल गरेको तर त्यसमा अनेक बाधा-व्यवधान आइपरेको बताए । ‘होटलजस्ता अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गुठी जग्गा दुरुपयोग गरिएका छन्, प्रयोग गर्न पाउँछन् तर कोषले प्रयोग र आम्दानीअनुरूप रोयल्टी लिन सक्नुपर्छ,’ डा. टण्डनले भने ।
हायात होटलबाट प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ पाउने गरी कोषले १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ ।
सहजै आउने उच्च आम्दानीबाट वञ्चित पाशुपत क्षेत्र नियमित खर्च र परम्परा धान्न स्रोतको अभाव पर्दै आएको छ । मठमन्दिरमा फलफूल चढाउन बजेट नहुने, पुजारीले न्यून वेतनमा चित्त बुझाउनुपर्ने, मन्दिर-देवलहरूको न्यूनतम मर्मत-सम्भारसमेत नहुनेलगायत समस्यापछाडि आर्थिक अभाव नै प्रमुख कारण हो ।
मल्लकालदेखिका शासकले मन्दिरको नित्य व्यवस्थापनका निम्ति कुत प्रणालीबाट स्रोत जुटाउन जग्गा भोगमा लगाउने परम्परा बसालेका हुन् । कोषले हजारौं किसानलाई मोहियानीमा जग्गा भोगचलन गराउँदै आएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले गुठीजग्गा प्रयोगबापत निजी क्षेत्रबाट असुलिने रकम अत्यन्तै न्यून मूल्य रहेको स्विकारे ।
उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘खासमा कोष र समिति दुवै सरकारकै अधीनमा रहेकाले यो रकम पनि नलिँदा हुने हो तर समयसँगै कम भएको भन्ने कुरा भयो भने कति तिर्नुपर्ने हो, कानुनतः समिति तिर्न तयार छ ।’ अन्पूर्ण पोष्टबाट